တိုင်းရင်းသားရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ပေါ်လစီမရှိဘူး – Nyang Media
KNU / ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်
လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို သိချင်လို့ရှိရင် အာဏာနဲ့ငွေကို ပေးလိုက်လေ။ အဲဒီလူရဲ့ဇာတိရုပ် ပေါ်လာတာပဲ။ အဲဒီတော့ NLD အစိုးရ အာဏာမရခင်က …
ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ကျင်းပခဲ့သဖြင့် ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ကရင်တိုင်းရင်းသူ ဒေါ်နော်အုန်းလှကို (၉ . ၉ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့က ကျောက်တံတားရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ယမန်နှစ် (၂၀၁၈) ခုနှစ်ကလည်း ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ကို ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဟင်္သတမြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ဦးဆောင်သူတချို့ တရားစွဲဆို ခံခဲ့ရ သည်။ ထိုစဉ်က ဦးဆောင်ကျင်းပသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါ သည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒေါ်နော်အုန်းလှကို ဖမ်းဆီးအရေးယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU Concerned Group ကထုတ်ပြန်တဲ့ သဘောထားကြေညာချက်ကို ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်ပါသလဲ။
MNM – Concerned Group ကထုတ်ပြန်တာ မှန်လည်းမှန်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ် တွေ၊ လက်ရှိအစိုးရမှ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ သူတွေ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ သတိထားသင့် တာက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှ စုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့၊ တည်ဆောက် ထားတဲ့ တိုင်းပြည် တစ်ခုဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဒီအခြေခံကိုတော့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တိုင်း နားလည် ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းတွေ ရှိတယ်။ သူတို့အလေးအမြတ် ထားတဲ့ နေ့ရက်တွေ ရှိတယ်။ သူတို့ တန်ဖိုး ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်။ဒါကို တိုင်းရင်းသားတွေ အသိအမှတ်ပြုသလိုနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ ကလည်း အလေးထားဖို့၊ အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီသမိုင်းတွေ ကိုမှမသိရင် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်တာတို့မှာ မျှော်မှန်းသလောက်၊ သွားချင်သလောက် ခရီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
အစိုးရရဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မယ် ဆိုတဲ့ဟာမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်ရတော့မလဲ။ ပြောတာက တခြား၊ လုပ်တာကတခြားလေ …
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတို့၊ အထွေထွေ သဟဇာတဖြစ်ရေးတို့၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး တို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက် ဖို့ ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘဝတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ ခံစားချက်တွေ ဒါတွေကို နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတို့၊ အထွေထွေသဟဇာတ ဖြစ်ရေးတို့ ဆိုတာတွေကို တည်ဆောက် နိုင်မှာပါ။ အဲဒါတွေတည်ဆောက်နိုင်မှသာ ဒီကနေ့ လုပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာတွေအောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နားလည်မှု၊ စာနာမှုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မှာ၊ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ဆောက် နီုင်မှာပါ။
ကရင်အမျိုးသား တစ်ယောက်ကို အရေးယူလိုက်တော့ ကရင်အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်း တွေက ခုလိုသဘောထားတစ်ခု ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီဆို ဂယက်ရိုက် သွားပြီလေ။ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က ကောင်းတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို …
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ အခုလို မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့။ ကရင်လူမျိုးတို့ရဲ့ အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး တန်ဖိုးထားတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တယ်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် သမိုင်းဝင် ဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တော့ အာဏာပိုင်တွေ က ဒီလိုထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ကိစ္စကို အရေးယူဆောင်ရွက်တာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေကို မထီမဲ့မြင်ပြုရာ၊ မလေးစားရာ၊ အသိအမှတ်မပြုရာ၊ စော်ကားရာရောက်တယ်။ Concerned Group ကထုတ်တဲ့ ကြေညာချက်ကလည်း ဒီအဓိပ္ ပါယ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကရင်အာဇာနည်နေ့ကျင်းပလို့ ကရင်အမျိုးသား တစ်ယောက်ကို အရေးယူလိုက်တော့ ကရင်အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်း တွေက ခုလိုသဘောထားတစ်ခု ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဆို ဂယက်ရိုက် သွားပြီလေ။ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က ကောင်းတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို ခံစားချက် မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် ဒီအစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဟာတွေကို ယုံကြည်တော့မှာ မဟုတ်တော့ ဘူး။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းမရဘူး၊ ထောက်ခံမှုလည်းမရနိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီကနေ့ အဓိကကျတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေက အများကြီး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လေ။ ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု ဒေါ်နော်အုန်းလှကို ဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့ကိစ္စအပါအဝင် တခြားသောအလားတူကိစ္စတွေဟာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရော ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု မျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
MNM – ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိလာမလဲဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် အစိုးရရဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မယ် ဆိုတဲ့ဟာမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်ရတော့မလဲ။ ပြောတာက တခြား၊ လုပ်တာကတခြားလေ။ ကျွန်တော်ကိုယ် တိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ဟင်္သာတမှာ သွားလုပ်တယ်(ကရင်အာဇာနည်နေ့ ကျင်းပခဲ့ခြင်း)ဗျာ။ အဲဒီမှာလာပြီးတော့ ပိတ်ပင် ဟန့်တား တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဒါကိုအလျော့မပေး လုပ်တော့ ထိပ်တိုက်ဆန့်ကျင်မှုတွေ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း တရားစွဲ ခံရတဲ့အထဲမှာ ပါခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှ သူတို့ကပြန်လျော့လိုက်တာ။ ကျန်တဲ့အရပ်သားတွေကိုတော့ အမှုဖွင့် ထားတယ် ဗျ။
တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးကို သူ့လူမျိုးသမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့အတွက်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အပေါ် ခုလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရရှိဖို့ အားနည်း သွားတာပေါ့ …
အရပ်သားတွေကလည်း ရုံးကိုမသွားဘူး။ ဒီအမှုက ပိတ်သိမ်းတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူး။ ဒါမျိုးတွေက မကောင်းဘူးလေဗျာ။ ဒီလိုလုပ်တာတွေကြောင့် သိပ်ပြီးခံစားချက်ပြင်းလာရင် အမျိုးသားအစွန်းရောက်စိတ်တွေ ပေါ်လာပြီးတော့ လူမျိုးရေး အမြင်ကွဲ လွဲမှု တွေ၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် အခုလိုကိစ္စတွေကို အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ သတိထားဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့။ ဒါတွေက အင်မတန်မှ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – တစ်ချိန်က တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ NLD ပါတီဟာ တစ်သားတည်း လိုဖြစ်ခဲ့ပြီး နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း နှစ်တွေမှာ နည်းနည်းလေး ဝေးကွာသလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေရော ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
MNM – ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို စကားတစ်ခွန်းပြောချင်တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျား လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို သိချင်လို့ရှိရင် အာဏာနဲ့ ငွေကို ပေးလိုက်လေ။ အဲဒီလူရဲ့ဇာတိရုပ် ပေါ်လာတာပဲ။ အဲဒီတော့ NLD အစိုးရ အာဏာမရခင်က တစ်မျိုး၊ အာဏာရပြီး တစ်မျိုး၊ အဲဒီလိုပဲဖြစ် သွားမှာပေါ့။ ဒါ ခင်ဗျားမေးတဲ့မေးခွန်းနော်၊ အရင်တုန်းက တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့နီးစပ်တယ်၊ အခု တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဝေးသွားတယ်ဆိုတော့ အဲဒီခုနကပြောတာနဲ့ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ (ရယ်လျှက်ပြော) သူတို့ မှာ တိုင်းရင်းသားရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ပေါ်လစီမရှိဘူး။ တကယ့်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ပေါ်လစီ လုပ်ငန်းစဉ် တွေမရှိလို့ အဲဒီလိုကွာဟမှုတွေ ဖြစ်တာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုဒေါ်နော်အုန်းလှကိစ္စအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ လက်ရှိ နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုတိုအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု တွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကိုရော ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
MNM – ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့မြင်သလိုပါပဲ။ အခြေခံဥပဒေပြင်တယ် ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်း ရှိတယ်။ ရှိတဲ့ အခါကျတော့ တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးကို သူ့လူမျိုးသမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့အတွက်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အပေါ် ခုလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရရှိဖို့ အားနည်း သွားတာပေါ့နော်။ နောက်ပြီး ဒီအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာ ကလည်း ဘယ်လိုသဘောလည်းဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်တာပေါ့နော်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု ဒေါ်နော်အုန်းလှကိစ္စအပေါ်မှာ တခြား ကရင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သဘောထားကရော KNU လိုပဲလား။
MNM – ယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်ထပ်တည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ KNU ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က ဒေါ်နော်အုန်းလှနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်သက်ညှာညှာဆောင်ရွက်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဆီကိုစာရေးပြီးပါပြီ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Tags: NLD, ကရင်, တိုင်းရင်းသား, ဖက်ဒရယ်, အာဇာနည်နေ့